Somalia Archives - Page 191 of 217 - Puntland Mirror Believable Media Website
August 30, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowlada Puntland ayaa soo bandhigtay sawirada niman katirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasoo ka dambeeyay weerarkii isbiimaynta ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Laamaha amaanka Puntland ayaa la faray in ay si deg deg […]
August 30, 2016 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sarkaal sare oo katirsan kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay dowlada federaalka Soomaaliya. Ibraahim Aadan Ibraahim oo ahaa madaxa Al-Shabaab u qaabilsan waxbarashada gobolada Baay iyo Bakool ayaa xalay oo Isniin […]
August 29, 2016 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka dowlada federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah xiray labo nin oo looga shaki qabo kooxda Al-Shabaab kadib markii ciidamada ay howlgal ku qaadeen degmada Dharkeynlay ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka wasaarada […]
August 27, 2016 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Isfahanwaa ku saabsan dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka Soomaaliya ayaa u dhaxeeya dowlada federaalka Soomaaliya iyo deeq-bixiyeyaasha, sida ay sheegayaan ilo-wareedyo diblomaasi oo lagu kalsoonaan karo. Deeq-bixiyeyaasha ayaa ka cudur-daartay dhaqaalaha ay dowlada federaalka […]
Baraawe-(Puntland Mirror) Wefdi balaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa maanta oo Sabti ah tagay magaalada Baraaawe ee gobolka Shabeelaha Hoose. Sida ay ilo-wareedyo u sheegeen warsidaha Puntland Mirror […]
Bursa-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo ku sugan dalka Turkiga ayaa masuuliyiin meeqaam hoose oo kamid ah wasaarada waxbarashada Turkiga kula kulmay magaalada Bursa oo kutaala waqooyiga-bari ee dalka Turkiga. Sida lagu […]
August 26, 2016 Puntland Mirror 0
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Jimce ah gaaray magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya si uu uga qaybgalo shir-weynaha Afrika iyo dalka Japan. Shirka oo ay kasoo qaybgalayaan […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo maanta oo Jimce ah shir jaraa’id ku qabtay caasimada Soomaaliya ayaa ka waramay halka ay marayaan qorshaha doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan sanadkan dabayaaqadiisa. Guddoomiyaha guddiga […]
ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday makhaayada Banaadir ee xeebta Liido
August 26, 2016 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay weerar koox hubaysan oo Al-Shabaab katirsan ay xalay oo Khamiis ahayd ku qaadeen makhaayad kutaala xeebta Liido ee caasimada Soomaaliya, Muqdisho. Weerarka ayaa ku bilaabmay kadib […]
August 25, 2016 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Koox hubaysan ayaa caawa weerartay maqaaxida Banaadir oo kutaala xeebta Liido ee Muqdisho. Kooxda weerarka qaaday ayaa weerarka u adeegsaday qarax gaari oo ay daba socdeen xabado rasaas ah. Lama oga khasaaraha dhabta […]